ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် မြန်မာဟိုတယ်ဝန်ထမ်း အရိုက်ခံရမှု ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်စေလို
ဒီကိစ္စကို တရားရုံးတွေက အကြောက်တရားကို ဘေးထားပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်စေချင်တယ်..
Let the world that Myanmar has rule of law and principle. some foreigners look down on myanmar because of the silly things made by military government.
Feb 25, 2012 01:49 AM
ဘယ်လိုပါလိမ့်၊ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတုန်းက အပြစ်မရှိတဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက်ကို အနီးကပ် ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး၊ ခပ်တည်တည် လုပ်နေခဲ့တာ၊ ခု အပြစ်ရှိတဲ့ ဂျပန်ကိုတော့ အရေးမယူရဲပဲ ကိုယ့်လူကိုယ် ဖိနှိပ်နေတာ အစိုးရတဲ့လား။
Feb 24, 2012 06:18 AM
Yes, I agree, that should be serious and take the action as soon as possible, and cover for our wonmen and their security.
Take action very seriously and justly otherwise the other country may think that we do not have any principle or any rule of law so that they may continue going on like that or they will do whatever they like. It is unacceptable behavior, therefore, stand up for the citizen particularly for the security of the ladies.
Feb 23, 2012 07:05 PM